Google ၏ Search Features များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Google ၏ Search Features များ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Dec 21, 2011 in Computers & Technology |6comments
၁၅ လက်မမှာ cm အနေနဲ့ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ …? ၃ မိုင်မှာ centimeters ဘယ်လောက် ရှိသလဲ …? ဒါတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အတွက်လည်း Google က သူ့ရဲ့ Search Features မှာ Unit Conversion ကို ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
Afghanistan Afghanis – AFN
Algeria Dinars – DZD
America (United States) Dollars – USD
Argentina Pesos – ARS
Australia Dollars – AUD
Austria Schillings – ATS*
Bahamas Dollars – BSD
Bahrain Dinars – BHD
Bangladesh Taka – BDT
Barbados Dollars – BBD
Belgium Francs – BEF*
Bermuda Dollars – BMD
Brazil Reais – BRL
Bulgaria Leva – BGN
Canada Dollars – CAD
CFA BCEAO Francs – XOF
Chile Pesos – CLP
CFP Francs – XPF
Costa Rica Colones – CRC
Croatia Kuna – HRK
Cyprus Pounds – CYP*
Czech Republic Koruny – CZK
Denmark Kroner – DKK
Deutsche (Germany) Marks – DEM*
Dominican Republic Pesos – DOP
Dutch (Netherlands) Guilders – NLG*
Eastern Caribbean Dollars – XCD
Egypt Pounds – EGP
Estonia Krooni – EEK
Fiji Dollars – FJD
Finland Markkaa – FIM*
France Francs – FRF*
Germany Deutsche Marks – DEM*
Greece Drachmae – GRD*
Hungary Forint – HUF
Iceland Kronur – ISK
Iran Rials – IRR
Iraq Dinars – IQD
Ireland Pounds – IEP*
Israel New Shekels – ILS
Italy Lire – ITL*
Jamaica Dollars – JMD
Japan Yen – JPY
Kenya Shillings – KES
Korea (South) Won – KRW
Kuwait Dinars – KWD
Lebanon Pounds – LBP
Luxembourg Francs – LUF*
Malaysia Ringgits – MYR
Malta Liri – MTL*
Mauritius Rupees – MUR
Morocco Dirhams – MAD
Norway Kroner – NOK
Oman Rials – OMR
Peru Nuevos Soles – PEN
Philippines Pesos – PHP
Poland Zlotych – PLN
Portugal Escudos – PTE*
Qatar Riyals – QAR
Romania New Lei – RON
Romania Lei – ROL*
Russia Rubles – RUB
Slovakia Koruny – SKK
Slovenia Tolars – SIT*
South Africa Rand – ZAR
South Korea Won – KRW
Spain Pesetas – ESP*
Sri Lanka Rupees – LKR
Sudan Pounds – SDG
Sweden Kronor – SEK
Switzerland Francs – CHF
Taiwan New Dollars – TWD
Trinidad and Tobago Dollars – TTD
Tunisia Dinars – TND
Turkey New Lira – TRY
Venezuela Bolivares Fuertes – VEF
Zambia Kwacha – ZMK
ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ စနိုက်ပါ ဇါတ်ကားထဲမှာ
မင်းသား က အင်တာနက်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး
ဂူးဂဲကနေ ၊ လူသတ်သမား သုံးတဲ့ စနိုက်ပါရိုင်ဖယ် အမျိုးအစား ကို ဆက်ခ်ျဘောက်စ် ထဲ ရိုက်ရှာတာ ကို
အဲ့ကားထဲမှာဗျာ ၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကော်နက်ရှင်း ၊ အန်းတား တစ်ချက်ခေါက်တာနဲ့ ၊ စာရိုက်လိုက်တဲ့ သေနတ် အမျိုးအစားကော ၊ ဆင်တူတွေကောပါ တန်းကြလာတာကလား
ွှအဲ့ကွန်နက်ရှင်က အဲ့ကားထဲမှာပဲ မဟုတ်လား
အဲဒါ ယုတ္ထိမရှိတာတွေ ရိုက်ပြတာနေမှာပါဗျာ ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာပြ ၊ အကုန်လုံးက ၀ိုင်းရီမှာပေါ့ ..
ကို အံစာတုံး ရေ..
ကျေးဇူး ပါဗျ.. တချို search လုပ်တာလေးတွေကို ဒါဖတ်မိ မှ သတိထားမိတော့ တယ်..
ပါးစပ် ကတော့ အော်နေတာပဲ googling ….လို့
အနော်က အာစိရဲ့ဘလူး သုံးမွှာပူးကို မ.သွားတဲ့..ချိုလာဂိုဂို ပါ
ကျနော်ထင်တာ အံဇာတုံးဆိုတာ အရင်က Cube ပေါ့နော်။
“* Absolute and replaced with EURO” ကတော့ အခု
တော့ ပါးစပ်ရာဇဝင်လေး တခုဖြစ်ခဲ့ပြီဗျို့။